मोटरसाइकलमा निस्केका श्रीमानको जङ्गलमा भेटियो शव, श्रीमतीलाई अन्तिम पटक फोनमा यसो भनेका रहेछन (भिडियो सहित) | Public 24Khabar
Home News मोटरसाइकलमा निस्केका श्रीमानको जङ्गलमा भेटियो शव, श्रीमतीलाई अन्तिम पटक फोनमा यसो भनेका...
तिलक निरौला मोटरसाइकलसहित २ दिनअघि देखी बे’पत्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा सूचनाको रुपमा आएको थियो । खोजी कार्य तिब्र रुपमा गरेको परिवारले कतै भेट्न सकेन । उनको बारेमा मे. ९ प २२०९ नम्बरको साइन मोटरसाइकलसहित निरौला बे’पत्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको थियो । चारैतिर चर्चा चलेको थियो
घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । शव पोस्टमार्टमका लागि पठाइसकेर तिब्र गतिमा अनुसन्धान गरिदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आज घटनास्थल पछि गाउँले होटलमा पुगेर तिलककि श्रीमती आमा र छोरीसंग कुराकानी गरिएको छ । उनिहरुले रुदै यस्तोसम्म सुनाए कि त्यहा उपस्थित सबैजनाको रुवाबासी नै चल्यो । आमाले बोलेका हरेक शब्दले सबैको मन छोयो । श्रीमतीलाई हिड्नुअघि फोनमा यस्तोसम्म भनेका रहेछन ।
Previous articleअन्तत डरायो मोदि सरकार भुमी फिर्ता गर्न तयार । संयुक्त टाेलिले चेक वाल मा अनुगमन गर्ने । (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleपेट बाट आन्द्रा स’हित क’लेजो’नै नि’स्कियो, आठ महीना’को कठै बाबु….(भि’डियाे हेर्नु*हाेस)